Too'ata fi qubeeffannoo
Kabala Durtti irraa,
Too'ata qubeeffannoo qubannoo qaree ammee irra jalqabee hanga dhuma galmichaa ykn filannotti guddata. Yeroo sana too'ata qubeeffannoo ka'uumsa galmicha irraa fufsiisuu dhaaf filuu ni dandeesa.
Too'atni qubeeffannoo jechoota dogoggoraan barreeffaman ilaaluun galmee fayyadamaatti jecha hin beekamne dabaluuf dirqali si'iif kenna.
Yoo mirkaneessituun caasluga fufaa ijaarame ta'e, qaaqni kun Qubeeffannoo fi Caaslugajedhama. Dogoggorri qubeeffannoo diimaan jala sararama, dogoggorri caaslugaa immoo cuquliisani. Jalqabarratti qaaqni dogoggora qubeeffannoo dhiheessa, itti aansee dogoggora caaslugaa.
Dogoggora qubee mirkaneessii hunda irratti hojjechuuf Caasluga mirkaneessi kakaasi, itti aansee dogoggora caaslugaa hunda irratti.
Galmee jechootaa keessaa miti.
Hima jecha qubee dogoggoraan barreeffame shoolamee waliin agarsiisa. Jecha ykn hima gulaalii ykn yaadawwan sanduuqa barruu gaddii keessaa tokko cuqaasi.
Afaan qubee mirkaneessuu akka fayyadu murteessa.
Galfatni afaanii of duraa mallattoo filannoo yoo to'annoon qubee afaan kanaaf kakaasame qaba.
Waliin makiinsa ammee jecha sirrii hin taanee fi jecha bakka bu'iinsa gara gabatee bakka bu'insa Of sirreessatti ida'a.
Bakka galmee jechoota hiika fayyadama filuu dandeessutti qaaqa bannuun, too'annoo qubeetii seera qindeessa.
Galmee hiikaa jechootaa Gulaali
Jecha hin beekamne galmee jechoota hiika fayyadamaatti ida'a.
Al tokko Tuffadhu
Jecha hin beekamne dhiisuun too'ata qubeeffannoo waliin fufsiisa.
Yoo qaaqa Too'aya qubeeffannoo banaa dhiiftu fi gara galmee keetti deebiftu asxaa kana kan qabduu kanaan gara galmee Enyuumaaatti jijjiira. Too'ata qubeeffannoo qubannoo qarree ammeeirraa fufsiisuuf Galmee Eenyumma cuqaasi.
Jecha hin beekamne yaada dhihaate ammee waliin bakka buusa. Yoo jecha qubee dogoggoraa caala jijjirte, himni hundi bakka bu'a.
Dhimoota mara jechoota hin beekamnee yaada ammee dhihaate waliin bakka buusa.
Title is: Too'ata fi qubeeffannoo